पारिजात स्‍मृति केन्द्र: पारिजात पुस्तिका - २०७२
पारिजात सृजन सम्मान – २०७१ : पुरुषोत्तम सुवेदी
पारिजात बालसाहित्य सम्मान –२०७१ : शारदारमण नेपाल
पारिजात सङ्घर्षशील नारी सम्मान–२०७१ : मिठाईदेवी विश्वकर्मा
पारिजात कला सम्मान – २०७१ : जीवन शर्मा
१ पारिजातका प्रकाशित तथा अप्रकाशित सम्पूर्ण कृति संरक्षण गरी यस संस्थाद्वारा निर्धारित प्राथमिकताअनुसार तिनलाई क्रमश: प्रकाशित गर्ने/गराउने ।
२ लोककल्याणका दृष्टिबाट प्राथमिकता निर्धारण गरी पारिजातका कृति स्वदेशी तथा विदेशी भाषामा अनुवाद गर्ने÷गराउने ।
३ पारिजातद्वारा प्रयुक्त वस्तु र उहाँको कक्षको यथोचित संरक्षण गर्ने ।
४ पारिजातको योगदानको यथोचित मूल्याङ्कन गर्न पारिजात स्मृति ग्रन्थ, अन्य सान्दर्भिक पुस्तक तथा पुस्तिका प्रकाशित गर्ने÷गराउने ।
५ पारिजातको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष उहाँको जन्म–जयन्ती मनाउने र परिचर्चा, गोष्ठी आदिको आयोजना गर्ने ।
६ पारिजातको नाममा पुरस्कार स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने ।
७ परस्पर आदान–प्रदान तथा सरसहयोगका निमित्त स्वदेश र विदेशका साहित्यिक, सांस्कृतिक सङ्घ–संस्थासँग सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापित गर्ने ।
८ माथि उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट स्रोत र साधन सङ्कलन गरी तिनको उचित व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने ।
१ कुनै पनि प्रकारको सहयोगबाट यस केन्द्रका उद्देश्यहरू पूरा गर्न आवश्यक मद्दत पु¥याउनु हुन समस्त शुभेच्छुकमा विनम्र अनुरोध छ ।
२ पारिजातसम्बन्धी कुनै पनि प्रकारका सामग्रीको प्रकाशित प्रति यस केन्द्रलाई उपलब्ध गराइ दिनुहुन अनुरोध छ । पारिजातका कुनै पनि रचना प्रकाशन गर्दा यस केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
३ पारिजातका कृतिबाट चलचित्र निर्माण गर्न चाहनेले यस केन्द्रमा सम्पर्क राखी तोकिएको प्राथमिकताक्रम अनुसार मात्र गर्न सकिने व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।
२०१३ सालमा ‘धरती’ पत्रिकामा दुई वटा कविता प्रकाशित गरी नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेकी पारिजात २०१४ सालमा युवा कविद्वारा स्थापित ‘रोधीघर’ नामक साहित्यिक यात्रामा समावेश हुनुभयो । २०१४ मै उहाँको पहिलो पुस्तकका रूपमा आकाङ्क्षा कवितासङ्ग्रह प्रकाशित भयो । घरको अवस्था अत्यन्त दयनीय भएकाले जीवन धान्न उहाँले २०१६ सालदेखि २०१८ सालसम्म मदन मेमोरियल स्कुल, पाटनमा शिक्षिकाका रूपमा काम गर्नुभयों । त्यहीबेलादेखि पारिजातलाई रोगले निकै च्यापेको थियो । हावापानी बदल्दा बिसेक होला कि भन्ने आशामा २०१८ सालमा उहाँ स्कुलको जागिर छाडेर एक महिनाका लागि पुनः दार्जिलिङ फर्किनु भयो । उहाँ सात वर्षपछि दार्जिलिङ फर्किनु भएको थियो । तर रोग झन्झन् बढ्दै गएपछि २०२१ सालदेखि ओछ्यान पर्नुभयो । ओछ्यान पर्दा उहाँ २७ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो । त्यस बेलादेखि पारिजात जीवनभरि ओछ्यानमै रहनुभयो ।
२०२३ मा तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाविरूद्ध विद्रोही सङ्गीतकार र लेखक÷कविहरूको एउटा सशक्त समूहमा पनि पारिजात संलग्न हुनुभयो । युवाहरूको त्यो जागरूक समूहले आफ्नो विद्रोहको स्वर गाउँगाउँ र सहरसहरमा गुन्जाउन थाल्यो । त्यस समूहमा रहेर पारिजात पनि विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भयो । त्यस सक््िरmयताका क््रmममा उहाँले आफ्नोे शरीरको अशक्तताको पनि कुनै पर्बाह गर्नु भएन । त्यस समूहको नाम थियो – राल्फा । पछि यही राल्फाली यात्रा नै नयाँ जनवादी संस्कृतिको विकास र प्रगतिशील लेखनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा साबित हुनपुग्यो ।
पारिजातको स्वास्थ्य अझै खराब हुँदै गयो । हाड–जोर्नीको रोग त छँदै थियो त्यसमाथि पनि क्षयरोग, अल्सर र दम पनि थपियो । विभिन्न रोगबाट मुक्ति पाउन उहाँ २०२६, २०२९, २०३० र २०३१ मा गरी पटक–पटक उपचार गर्न भारत जानुभएको थियो । स्वास्थ्यमा कुनै सुधार नहुने स्पष्ट भएपछि उहाँले आफ्नोे मनलाई सम्हाल्नुभयो र आफूलाई साहित्यबाट मात्र नभई वैचारिक रूपले पनि देश र जनताका निम्ति समर्पित गर्ने अठोट लिनु भयो । त्यही अठोटसँगै उहाँले २०३४ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (चौथो महाधिवेशन) को सदस्यता लिनु भयो । उहाँ महिला मुक्तिको काममा पनि सक्रिय हुन थाल्नु भयो । अखिल नेपाल महिला सङ्घको अध्यक्ष बन्दै उहाँ भूमिगत काममा समेत संलग्न रहनु भयो । पारिजात २०३५÷२०३६ को आन्दोलनमा निकै नै सक्रिय रहनुभएको थियो । २०३६ मा वामपन्थी लेखक–कलाकारहरूको साझा मोर्चाका रूपमा ‘प्रगतिशील लेखक कलाकार सङ्घ’ को स्थापना गर्नका लागि पनि उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको थियो ।
पारिजात २०४६ को जनआन्दोलनमा पनि अत्यन्तै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । विभिन्न क्रियाकलापद्वारा जनआन्दोलनलाई सफल पार्न उहाँ क्रियाशील रहनुभयो । २०४६ चैत ३ गते लेखक, कवि तथा कलाकारले कालोपट्टी बाँधी विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यो ऐतिहासिक काममा पारिजात अघिल्लो पङ्क्तिमा बसेर सहभागी हुनुभएको थियो । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्नुपर्ने मागसहित सङ्घर्षमा ओर्लिएको ‘प्राज्ञिक सङ्घर्ष समिति’ को संयोजक हुनुहुन्थ्यो– पारिजात । उहाँ प्राज्ञको सही पहिचान, मापदण्ड र परिचालनका निम्ति पर्याप्त प्रयासरत रहनुभयो ।
उहाँले मासिक रूपमा काठमाडौंमा नियमित सञ्चालन हुने प्रतिभा प्रवाह र साहित्य सन्ध्याका साहित्यिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो । यी कार्यक्रममा उहाँलाई प्रमुख अतिथि बनाइन्थ्यो । त्यस क््रmममा उहाँले नयाँ पुस्ताका सिर्जना सुन्नुहुन्थ्यो र उचित सल्लाह दिनुहुन्थ्यो ।
पारिजात विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थामा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नेपाल मानवअधिकार सङ्गठनका उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष, बन्दी सहायता नियोगका संस्थापक अध्यक्ष तथा त्रिवि सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । Out Right International, Feminist Association, Society for Women Geographer, Amnesty Internationalआदिजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थासँग पनि पारिजात सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो ।
पारिजातले मदन पुरस्कार, गङ्की पुरस्कार र पाण्डुलिपि पुरस्कार पाउनुभएको थियो । उहाँलाई ‘जनमत’ र ‘नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घ’ द्वारा अभिनन्दन गरिएको थियो । पारिजातद्वारा लिखित पुस्तक शिरीषको फूलको अङ्ग्रेजी अनुवाद Blue Memosa लाई अमेरिकाको मेरिल्यान्ड युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रममा राखिएको छ ।
दिनहरू बित्दै जाँदा साहित्यकार पारिजात झनझन शिथिल बन्दै जानु भयो । दीर्घरोगकै कारण वीर अस्पतालको विशेष उपचार कक्षमा उपचार गराउँदा गराउँदै २०५० साल वैशाख ५ गते बिहान ४ बजे सुप्रसिद्ध साहित्यकार पारिजातको निधन भयो ।
पारिजात सिर्जन सम्मान–२०७१ बाट सम्मानित
साहित्यकार पुरुषोत्तम सुवेदीकोे परिचय
साहित्यकार पुरुषोत्तम सुवेदी मूलतः कवि तथा समालोचक हुन् । त्यस बाहेक निबन्ध लेखनमा पनि उनको सक््िरmयता रहँदै आएको छ । उनी प्रगतिशील साहित्यकारका रूपमा सुपरिचित छन् ।
साहित्यकार सुवेदीको जन्म वि.सं. २०११ साल असार २३ गते तेह«थुम जिल्लाको सावलामा भएको हो । उनको बसोबास अहिले काठमाडौको कलङ्कीमा रहेको छ ।
उनले प्रारम्भिक शिक्षा जन्मस्थानमै प्राप्त गरे । तेह«थुमको सिंहवाहिनी हाइस्कुलबाट २०२७ सालमा एसएलसी पास गरेका साहित्यकार सुवेदीले उच्च शिक्षा काठमाडौं आएर आर्जन गरे । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका छन् ।
२०३९ सालमा राष्ट्रिय वीमा संस्थानमा अधिकृतको रुपमा सेवा प्रवेश गरेका साहित्यकार सुवेदीले त्यस संस्थामा तीस वर्षसम्म सेवा प्रदान गरे । उक्त संस्थाको उच्च तहमा पुगेर तीन वर्षअघि अवकाश प्राप्त उनी विभिन्न संस्थामा परामर्शदाताका रूपमा समेत रहँदै आएका छन् ।
साहित्यकार सुवेदी २०३० सालदेखि साहित्य सिर्जनमा लागेका हुन् । उनको पहिलो पटक प्रकाशित साहित्यिक रचना कविता हो । उनको पहिलो कविता २०३२ सालमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसयता उनी निरन्तर सिर्जनामा संलग्न रहँदै आएका छन् ।
कवि एवम् समालोचक सुवेदीका हालसम्म तीन वटा कृति प्रकाशित छन् । तिनमा दुई वटा कविता सङ्ग्रह र एउटा समालोचना–कृति रहेका छन् । उनको पहिलो कविता सङ्ग्रह ‘आतङ्कगन्ध’ २०४८ सालमा प्रकाशित भएको थियो भने दोस्रो कविता सङ्ग्रह ‘एक्लो विजेता’ २०५६ सालमा प्रकाशित भएको थियो । २०६६ सालमा उनको ‘सङ्क््रmमणको साहित्य र समकालीनता’ शीर्षकको समालोचनात्मक कृति प्रकाशित भएको थियो । यस बाहेक उनका प्रशस्त फुटकर कविता, समालोचना र निबन्धहरू प्रकाशित छन् । ती विधामा साहित्यकार सुवेदीका अन्य कृतिहरू प्रकाशोन्मुख रहेका छन् ।
चालीस वर्षभन्दा लामो सिर्जना–यात्राका क््रmममा साहित्यकार सुवेदी प्रगतिशील लेखक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य समेत रहिसकेका छन् । उनी साझा पुरस्कारबाट सम्म्मानित छन् । उनले ‘सङ्क्रमणको साहित्य र समकालीनता’ का लागि २०६६ सालको साझा पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
साहित्यकार सुवेदीको संलग्नता वीमा र आर्थिक विषयको लेखनमा पनि रहँदै आएको छ । वीमा र आर्थिक विषयमा उनका थुप्रै लेखहरू प्रकाशित छन् । यस विषयमा उनी स्तम्भकारको रूपमा समेत सुपरिचित छन् । उनले अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, श्रीलङ्का, चीन, भारत लगायतका मुलुकको भ्रमण गरेका छन् ।
कविता र समालोचना विधामा साहित्यकार सुवेदीको सिर्जनात्मक उपस्थिति उल्लेखनीय रहेको छ । पारिजात स्मृति केन्द्रले साहित्यकार पुरुषोत्तम सुवेदीको सिर्जनात्मक योगदानको कदर गर्दै २०७१ सालको पारिजात सिर्जन सम्मान प्रदान गरेको छ ।
पारिजात बालसाहित्य सम्मान–२०७१ बाट सम्मानित
साहित्यकार शारदारमण नेपालको परिचय
नेपालको प्रगतिवादी साहित्यिक क्षेत्रमा शारदारमण नेपाल सुपरिचित नाम हो । सन् १९४७ मे १० तारिखमा बाबु तीर्थराज नेपाल र आमा सुमित्रा नेपालका सन्तानका रूपमा नुवाकोट जिल्लाको नर्जामण्डप गाउँ विकास समिति, वडा नं. ७ डोटेलमा जन्मिएका नेपालले वि.सं. २०२१ सालमा बनारसबाट प्रकाशित भएको ‘नयाँ पाइलो’ साहित्यिक पत्रिकामा कविता प्रकाशित गरेर नेपाली साहित्यको आँगनमा सर्वप्रथम पाइलो राखेका हुन् ।
साहित्यकार नेपालको वि.सं. २०३२ सालमा प्रकाशित ‘छोरीसित’ खण्डकाव्य प्रथम पुस्तकाकार कृति हो । त्यस यता खण्डकाव्य, कविता सङ्ग्रह र बालसाहित्यका गरी उनका करिब दुई दर्जन कृतिहरू प्रकाशित छन् । लेखनको थालनीदेखि नै वर्गीय पक्षधरतामा आधारित रहेर सिर्जना गरेका नेपालले अहिलेसम्म पनि त्यो निरन्तरतालाई कायमै राखेका छन् ।
नेपाली साहित्यका विविध विधामा कलम चलाए पनि पछिल्लो समयमा उनको मूल क्षेत्र बालसाहित्य नै हो । सरल एवम् सुबोध्य भाषाशैलीमा विज्ञानपरक विचारको पक्षमा बालबच्चालाई शिक्षित बनाउनु साहित्यकार नेपालको मूल ध्येय देखिन्छ । सामाजिक जिम्मेवारीबोध गरेर बाल साहित्यको सिर्जनामा आफूलाई निरन्तर लगाउँदै आएका साहित्यकार नेपालले नेपाली बालसाहित्यको बजारमा आफ्नो भिन्न पहिचान बनाउन सफल भएका छन् ।
सरल अभिव्यक्तिमा सशक्त विचार प्रवाहित गर्ने साहित्यकार नेपाल व्यावहारिक जीवनमा पनि अत्यन्त स्वाभिमानी देखिन्छन् । पुरस्कार र सम्मान पाउने दौडमा कतै पनि सहभागी हुन नरुचाउने नेपालले यस अघि नेपाली प्रगतिवादी साहित्यमा यथेष्ट योगदान गरे वापत २०५८ सालको साहित्य सन्ध्या पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । साहित्यकार शारदारमण नेपाल नेपाली प्रगतिवादी साहित्यका एक जना उल्लेख्य साधक हुन् । बालसाहित्यको क्षेत्रमा उनको विचारसम्पन्न र निरन्तर योगदानको कदर गर्दै पारिजात स्मृति केन्द्रले पारिजात बालसाहित्य सम्मान २०७१ बाट सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पारिजात संघर्षशील नारी सम्मान–२०७१ बाट सम्मानित
मिठाईदेवी विश्वकर्माको परिचय
मिठाईदेवी विश्वकर्मा जनविरोधी राज्यव्यस्थाको विरुद्ध नेपाली समाजलाई मुतिm दिलाउन निरन्तर सङ्घर्षशील नारी हुन् । बलिदानी भावनाका साथ राजनितिक आन्दोलनमा सहभागी हुन पुगेकी उनी राजनीतिक कामसँगै दलित उत्पीडित समुदायमाथि भइरहेको चरम शोषण, दमन र भेदभावका विरुद्ध समेत लड्दै आएकी छन् । राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार र महिला अधिकारको क्षेत्रमा यी सङ्घर्षशील नारीले दिएको योगदान प्रशंसनीय रहेको छ । भाषाका क्षेत्रमा समेत उनको योगदान रहेको छ ।
दलित आन्दोलनकी नेतृका रूपमा समेत सुपरिचित मिठाईदेबी विश्वकर्माको जन्म वि.सं. १९९३ साल फागुन १० गते भएको हो । उनको पुर्खौली थलो काठमाडौंको कीर्तिपुर हो । उनले बि.ए. सम्मको शिक्षा आर्जन गरेकी छन् । उनी ‘प्रथम स्नातक’ का रूपमा पनि चिनिन्छिन् । दलित महिलामा स्नातक अध्ययन गर्नेमा उनी पहिलो हुन् ।
जीवनमा निरन्तर सङ्घर्षशील रहेकै कारण मिठाईदेवी विश्वकर्मा सामाजिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रबाट सम्मानित रहँदै आएकी छन् । डा. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार,अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकर्मा पुरस्कार,नेपाल दलित जनविकास सम्मान, दीनबन्धु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान,शताब्दियौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक सम्मान, मोतीदेवी स्मृति सम्मान, भानुभक्त पुरस्कार जस्ता अनेकौं सम्मानहरू उनले प्राप्त गरेकी छन् । यसरी नै राष्ट्रिय महिला आयोग, शिक्षामा नारी समूह जस्ता अनेकौं सङ्घसंस्थाहरूबाट उनी अभिनन्दित रहेकी छन् ।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलन, महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनसँगै समाजका हरेक न्यायपूर्ण आन्दोलनमा मिठाइदेवी विश्वकर्माको संलग्नता र सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको छ । नेपाली समाजमा निरन्तर सङ्घर्षरत रहेर पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै उहाँलाई २०७१ सालको पारिजात सङ्घर्षशील नारी सम्मानद्वारा सम्मानित गरिएको छ ।
पारिजात कला सम्मान– २०७१ बाट सम्मानित
कलाकार जीवन शर्माको परिचय
बाबु चन्द्रदत्त उपाध्याय र आमा द्रौपदीदेवीबाट वि.सं. २०१६ सालमा बागलुङ जिल्लामा जीवन शर्माको जन्म भएको हो । उनी सानै उमेरदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा आकर्षित भएका थिए । उनी सुरूमा आफ्नै विद्यालयमा गीतहरू गाउने गर्थे । गीत–सङ्गीत क्षेत्रमा मोह बढ्दै गएपछि उनी २०३२ सालमा ‘वेदना परिवार’ मा आबद्ध भई संस्थागत रूपमै कलाकारको रूपमा प्रस्तुत हुन पुगे ।
मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरी अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्न भ्याएका कलाकार जीवन शर्मा आफ्नो मूल ध्येय कलाकारिता नै रहेको बताउँछन् । व्यावसायिक गीत–सङ्गीतले बजार ढाकेको समयमा पनि उनले सांस्कृतिक क्षेत्रबाट जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ आफूलाई प्रगतिशील फाँटमा निरन्तर सक््िरmय गराए । पछिल्लो समयमा उनी रक्तिम सांस्कृति अभियानमा सक््िरmय रहँदै आएका छन् ।
क््रmान्तिकारी गीतहरू गाउने जन–कलाकारको रूपमा सक््िरmय रहेकै कारण कलाकार जीवन शर्माले निरङ्कुश पञ्चायती कालमा अनेकौं दुखहरू बेहोर्नु प¥यो । त्यस बेला उनले भूमिगत अवस्थामै रहेर पनि आफ्ना स्वरहरूलाई भित्रभित्रै गुञ्जाएका थिए । त्यसकै कारण उनी गिरफ्तारीमा समेत परेका थिए । पछि २०५९–२०६३ को शाही कालमा पनि उनी अर्धभूमिगत भई क््िरmयाशील रहे ।
शालीन, निडर र जुझारु स्वभावका कलाकार शर्माले जन–गीति यात्रामा लामो समय व्यतीत गरिसकेका छन् । २०४७ सालमा ‘रक्तिम परिवार, भाग–१’ गीति चक्का सार्वजनिक गरेका कलाकार शर्माका हाल ४५ वटा गीति चक्का सार्वजनिक भइसकेका छन् । ‘सिमली छायामा बसी’ लगायतका लोकप्रिय गीतहरू समेटिएका उनका गीति चक्काहरूमा पाँच सयभन्दा बढी गीतहरू समावेश भएका छन् ।
गीति नाटकका क्षेत्रमा पनि कलाकार जीवन शर्माको योगदान रहेको छ । उनका ‘ठूली’, ‘पूजा’, ‘नालापानीदेखि कालापानी’सम्म र ‘जवाफ’ गरी चार वटा गीति नाटक मञ्चन भइसकेका छन् ।
देशका सबैजसो जिल्लामा कार्यक््रmम गर्न भ्याएका छन् जीवन शर्माले । उनले भारत, हङकङ, मलेसिया, कोरिया, जापान, सिङ्गापुर, दुवई, कतार, ओमन, जर्मनी, डेनमार्क, स्विडेन, फ्रान्स, बेल्जियम जस्ता विदेशी मुलुकको समेत साङ्गीतिक भ्रमण गरिसकेका छन् ।
प्रस्तुति : वदन शर्मा
पारिजात बालसाहित्य पाण्डुलिपि प्रशंसापत्र प्राप्त गर्नेहरू
पारिजात बालसाहित्य सम्मान प्राप्त गर्ने साहित्यकार
Posted by पारिजात स्‍मृति केन्द्र at 2:21 AM